5:22 PM Views: 951
Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:25pm posts တွေလာဖတ်သွားတယ်...အမရဲ့ နည်းပညာတွေ ဗဟုသုတလေးတွေလည်း ရှယ်ပါဦးအမရေ..မျှော်လင့်နေမယ် Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:24pm အမ မနော ညီမကို add လိုက်ပါဦး. :) Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:24pm ဖား....... Comment by ကောင်းကောင်း on March 2, 2013 at 11:10pm ကြော်စားလိုက် Comment by Ye` Oo Paing on March 1, 2013 at 11:06pm ကောင်းတဲ့ဖားရောမရှိဘူးလားဗျာ ကြော်စားလို့ရတာလေးပေါ့... Comment by Ap3x on February 4, 2013 at 1:22pm တပတ်တခါလောက် တွေ့တွေ့နေရတဲ့ ဖားကလေးတွေ. Comment by lulu on January 24, 2013 at 7:40pm အဲဒီဖားတွေကိုဘယ်လိုပညာပေ့းရမလဲဆိုတာကိုဆက်ရေးရင်ကောင်းမယ် Comment by AMY on January 24, 2013 at 10:34am လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ဒီလိုဖားမျိုး တွေက ရှိကိုရှိစမြဲပါ။... Comment by Phyu Sin Kyaw on January 24, 2013 at 10:17am ဖားတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပဲနော်။ မူးတောင်မူးသွားတယ်။ :) RSS
ml updated their profile8 hours agomanawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျWednesdaypeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3Nga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျNov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26 More... RSS